SaffronCoin စျေး - အွန်လိုင်း SFR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို SaffronCoin (SFR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ SaffronCoin (SFR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ SaffronCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
SFR – SaffronCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ SaffronCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
SaffronCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SaffronCoinSFR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00612SaffronCoinSFR သို့ ယူရိုEUR€0.00519SaffronCoinSFR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00468SaffronCoinSFR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00558SaffronCoinSFR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0547SaffronCoinSFR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0387SaffronCoinSFR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.136SaffronCoinSFR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0228SaffronCoinSFR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00811SaffronCoinSFR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00857SaffronCoinSFR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.136SaffronCoinSFR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0474SaffronCoinSFR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0329SaffronCoinSFR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.458SaffronCoinSFR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.03SaffronCoinSFR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00841SaffronCoinSFR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00937SaffronCoinSFR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.191SaffronCoinSFR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0426SaffronCoinSFR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.653SaffronCoinSFR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.26SaffronCoinSFR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.37SaffronCoinSFR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.449SaffronCoinSFR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.168
SaffronCoinSFR သို့ BitcoinBTC0.0000005 SaffronCoinSFR သို့ EthereumETH0.00002 SaffronCoinSFR သို့ LitecoinLTC0.000113 SaffronCoinSFR သို့ DigitalCashDASH0.00007 SaffronCoinSFR သို့ MoneroXMR0.00007 SaffronCoinSFR သို့ NxtNXT0.478 SaffronCoinSFR သို့ Ethereum ClassicETC0.000902 SaffronCoinSFR သို့ DogecoinDOGE1.77 SaffronCoinSFR သို့ ZCashZEC0.00007 SaffronCoinSFR သို့ BitsharesBTS0.189 SaffronCoinSFR သို့ DigiByteDGB0.196 SaffronCoinSFR သို့ RippleXRP0.0217 SaffronCoinSFR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000211 SaffronCoinSFR သို့ PeerCoinPPC0.0203 SaffronCoinSFR သို့ CraigsCoinCRAIG2.79 SaffronCoinSFR သို့ BitstakeXBS0.261 SaffronCoinSFR သို့ PayCoinXPY0.107 SaffronCoinSFR သို့ ProsperCoinPRC0.768 SaffronCoinSFR သို့ YbCoinYBC0.000003 SaffronCoinSFR သို့ DarkKushDANK1.96 SaffronCoinSFR သို့ GiveCoinGIVE13.26 SaffronCoinSFR သို့ KoboCoinKOBO1.39 SaffronCoinSFR သို့ DarkTokenDT0.00564 SaffronCoinSFR သို့ CETUS CoinCETI17.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 10:15:02 +0000.